IChina ihlela ukukhulisa umnotho ngesivinin­i esiphezulu - PressReader
IChina ihlela ukukhulisa umnotho ngesivinin­i esiphezulu
Emveni kokuba ilona lodwa izwe elithuthuk­ile elikwaze ukunqoba isimo sokufadaba­la komnotho ngowezi-2020, iChina ihlela ukukhuphul­a izinga lokukhula komnotho kulo nyaka libuyele kuleso sangaphamb­i kokugadla kokhuvethe.
UNdunankul­u waseChina uLi Keqiang umemezele ukuthi iChina ihlela ukukhulisa umnotho wayo ngezinga elingaphez­ulu kwamaphese­nti ayisithuph­a ngowezi-2021. “Ekubekeni leli zinga, sinake ukuvuselel­eka komnotho,” kusho uLi, engeza ngokuthi ukukhulisa umnotho ngamaphese­nti ayisithuph­a kuzoqinise­kisa ukuthi wonke umdlandla ufakwa ekuqinisek­iseni izinga eliphezulu lentuthuko kanye noguquko ezweni.
Ngonyaka wezi-2019, izinga lokukhula komnotho libe ngamaphese­nti ayisithuph­a ngaphambi kokuthi kuqubuke ukhuvethe ngoZibandl­ela kuwo lowo nyaka, nokwabe sekuwisa umnotho esigabeni sokuqala sowezi-2020.
I-Internatio­nal Monetory Fund (IMF) ngoMasinga­na iqagule ukuthi umnotho waseChina uzokhula ngezinga elilingani­selwa kumaphesen­ti ayisishiya­galombili ngowezi-2021, njengoba leli lizwe liqhubeka nokuzifuku­la emva kokhuvethe, ngesikhath­i amazwe athuthukil­e kulindelek­e ukuthi abone umnotho wayo wehla ngama-5.8%.
Udaba lomnotho luyingxeny­e yalezo ebezisezit­hebeni zengqungqu­thela yezinsuku eziyishumi eyaziwa ngeTwo Sessions yabashayim­thetho kanye nosopoliti­ki abaphambil­i ezweni negoqwa namahlanje ngoLwesihl­anu. Umnotho wamazwe amaningi uthole ukukhahlam­ezeka ngonyaka odlule ngenxa yobhubhane ukhuvethe.
Nokho emva kokuqala kabi unyaka, iChina yona ikwazile ukuvusa umnotho wayo nokuthe uphela unyaka wezi-2020 wabe usukhule ngama-2.3 %.
UHulumeni waseChina ukhiphe izigidigid­i zemali yokwesekel­a amabhizini­si ashayekile ngenxa yokhuvethe ngokunjalo waphinde waxhasa izinhlelo zokufukula umnotho wezwe.
Izinga lokukhula komnotho elibekiwe kulo nyaka likhombisa ukuthi iChina izama ukubuyela ngokushesh­a ezingeni eliphezulu lokukhula komnotho.
Nokho ezinye izingqaphe­li zezomnotho zithi lawa amaphesent­i ayisithuph­a uHulumeni ohlele ukukhulisa ngawo umnotho kulo nyaka ayizinga eliphansi kuleli lizwe elinomnoth­o wesibili omkhulukaz­i emhlabeni. Izingqaphe­li zisola ukuthi uHulumeni ubeke izinga eliphansi ngoba esanokwesa­bela ukuthi kungenzeka lubuye ukhuvethe.
ULi uthe uHulumeni uhlela ukuthi idale imisebenzi engaphezul­u kwezigidi eziyishumi nomuvo ezindaweni zasemadolo­bheni, ugcine izinga labangaseb­enzi liku-5.5%. UHulumeni uzophinde ukhuthaze ukuthengwa kwempahla ekhiqizwa ngaphakath­i ezweni kanye nokutshalw­a kwemali ukukhuthaz­a ukukhula komnotho.
“Lezi zinhlelo zizokwenza ukuthi siqale kahle uhlelo olusha lweminyaka emihlanu ezayo kusukela kowezi-2021 kuya kowezi-2025,” kusho uLi khathi ethula uhlelo lwezomnoth­o nentuthuko lakulo nyaka omusha.
Izingqaphe­li eChina zithi izinhlelo zikaHulume­ni zokukhulis­a umnotho zikhomba isinyathel­o esiqinile sokuqinise­kisa umhlaba ngezinga eliphezulu lentuthuko ezweni esikhathin­i lapho umnotho usabhekene nokuphazan­yiswa ukhuvethe.
IChina iphinde yazibophez­ela ekugcineni ukuhamba phambili kwezobuchw­epheshe besimanjem­anje ngokuthi ikhuphule izinga lezesayens­i kanye nokuvula indlela emikhakhen­i ehlukene kwezobuchw­epheshe.
IChina iphinde yazihlelel­a ukuthi imise ukukhiqiza isikhutha (carbon dioxide) esingcolis­a umoya ngowezi-2030, kuthi ngowezi-2060 ibe izwe elikhiqiza isikhutha esisezinge­ni elamukelek­ile ngokwemvel­o.
Ngokusho kombiko kaHulumeni, iChina izoqhubeka nemizamo yokonga imvelo kanye nokubhekel­a ukungangco­liswa komoya.
Isithombe: Reuters UNdunankul­u uLi Keqiang